देश बनाउने सही बाटो - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
देश बनाउने सही बाटो
आज समयले तिनै युवाहरुको खोजी गरिरहेको छ । अव राष्ट्रको उन्तीको ढोका तिनै श्रमिकहरुको हातमा छ,जो श्रम गर्छन,जो स्वरोजगारको खोजी गर्छन र आत्मनिर्भर भएर बाँच्छन ।
सम्बृद्धि जीवनलाई उज्यालो बनाउने पाटो हो । प्रर्याप्त सन्तुलित खाना, बस्नलाई राम्रमे घर, लाउनलाई कपडा, शुद्घ पिउने पानी यातायात र संचार, गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ सुविधा, बिचारमा प्रगतिशिलता र स्रोत र साधनमा पहुँचको अवस्थालाई नै समृद्घ जीवन भन्न सकिन्छ ।
आज नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई हेर्दा यी आवश्यकताहरु सवै जनताले अझै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । कैयौँ नेपालीहरुको सांझ– विहानको छाक टार्ने समस्या यथावत छ । यही खाने लाउने समस्या समाधानका लागि नेपाली जनताले परिर्वतन खोजे । राष्ट्र र जनताको उन्नतिका लागि नै ठुला ठुला आन्दोलनहरु भए ।
पार्टीहरुले भुमिगतै रुपमा भएपनि जनतामा चेतना जगाउने र आफ्ना अधिकारका लागि उठन र लडन जनतालाई जगाउने काम गरे । बहुदलले सवै कुरा खुला पारिदियो । हिजो धनि र गरिवका विचमा विचार र चेतनाको पनि गरिवी थियो । गरिव हुनु तथा तल्लो जात हुनु भाग्यको खेल हो भन्ने मान्यतामा थिचिएको समाजमा जनता आफनो भाग्य नै यस्तै भएको कुरा स्वीकार गरेर बसेको अवस्था थियो ।
जनताले खोजेको शासन ब्यवस्था नआइ जनताको दिन आउदैन भनेर नै पार्टीहरु शासन ब्यवस्था परिर्वतनमा लागे । जनता आन्दोलनमा लागे । विस २०६२÷६३ को शान्तिपुर्ण आन्दोलनले १५ सय वर्ष देखिको सामन्तवाद र २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था परिर्वतन गरी गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था स्थापित भएको छ । नयाँ संविधान बनेको छ । जनताले आफुलाई मन पर्ने संविधान आफै निर्माण गरेका छन ।
हिजोका राणाकालीन दिनहरुमा जनता बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन।पंचायतकालमा थोरै खुकुला दिनहरु आए । पार्टीहरुले भुमिगतै रुपमा भएपनि जनतामा चेतना जगाउने र आफ्ना अधिकारका लागि उठन र लडन जनतालाई जगाउने काम गरे । बहुदलले सवै कुरा खुला पारिदियो । हिजो धनि र गरिवका विचमा विचार र चेतनाको पनि गरिवी थियो । गरिव हुनु तथा तल्लो जात हुनु भाग्यको खेल हो भन्ने मान्यतामा थिचिएको समाजमा जनता आफनो भाग्य नै यस्तै भएको कुरा स्वीकार गरेर बसेको अवस्था थियो ।
तर आज जनताका बिचारमा परिर्वतन आएको छ । पछाडि परेको वर्ग पनि आज राजनितिक चेतनाबाट जर्मुराउदै छन । अव भाग्य होइन अधिकार र उपभोगका लागि मानिसहरु उठदैछन ।हिजो घरभित्र बस्ने महिलाहरु आज खाडि मुलुक देखि जापान, बेलायत, अमेरिकासम्म काम, दाम र अवसरको खोजिमा पुगिरहेका छन ।
नेपाललाई नयाँ ढंगले विकास र परिर्वतन गर्नु पर्नै अवधारणाहरु अगाडि आएका छन । अर्थात नयाँ नेपाल बनाउने कुरा आएका छन । मुलुक अव राजनितिक मुद्घाबाट आर्थिक बिकास र समृद्घिको चरणमा प्रबेश गरेको छ । यसका लागि आर्थिक सुशासनको अवस्थामा उल्लेख्य परिर्वतनको खाँचो छ । देशको आर्थिक समृद्घिका निमित्त श्रमशत्ति, सा्रेत र साधनको परिचालन हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
हाम्रो देशको श्रम-शत्ति कहाँ र कस्तो अबस्थामा छ ? स्रोत र साधनहरुलाई के कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? यसको खोजी हुनु जरुरी छ । नेपालको समृिद्घका आधार, प्रणाली, संरचना, अवसर र अवरोधहरुको पहिचान गरी अगाडि बढनु पर्दछ । युवा शक्ति बिदेसिएको छ । यसलाई रोक्ने बिन्दुको खोजि गरिनु पर्दछ ।
हाम्रा चुनौतीहरु :
एकातिर हत्या, हिंसा, बेरोजगारी, कालोबजारी,भष्टाचार,महिला बेचबिखन छदैछ भने अर्को तर्फ हाम्रो नेपाली समाज पुंजिवादको प्रारम्भिक अवस्थातिर रुपान्तरित हुदैछ । सवै कुरा पुँजिसंग दाँजिने र साटिने अवस्था बन्दै छ । यतिबेला महिला बिज्ञापनका साधन र चरम उपभोग्य बस्तु बन्दै छन । छन गेडी ‘सवै मेरी छैनन, गेडी सवै टेडी’ यो उखान अव नेपाली समाजमा मेल खाँदैछ । तर राज्यका चुनौती भने यस्ता रहेका छन ।
प्रत्येक बर्षको आर्थिक बृद्घिदर अत्यन्त न्युन छ ।
देश भित्रको बढ्दो बेरोजगारीले जनशक्ति पलायन भैरहेको छ ।
हरेक बर्षको आयात निर्यातलाई हेर्दा आयात बढदो र निर्यात घटदो भै ब्यापार घाटामा देखिन्छ ।
उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारणले नै जनतामा असन्तुष्टी आएको छ ।
गरिव झन गरिव हुदैछन भने केही मानिसको हातमा पूँजि थुप्रीदैछ ।
अवको हाम्रो बाटो :माथिका चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै देश र जनतालाई समृद्घ बनाउने दिशातर्फलाग्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर त्यसका लागि ठोस योजनाको भने खाँचो पर्दछ । स्वाधिन अर्थतन्त्रको मौलिक विकासको बाटो नै अवको हाम्रो मुल बाटो बन्नुपर्दछ । ब्यक्ति –ब्यक्तिमा छरिएर रहेको पुँजिलाई एकत्रित गर्दै साना ठुला योजना, परियोजना र संस्थाहरुको निर्माण गर्देै थप पुँजि निर्माणको दिशा तर्फ अगाडि बढन जनतालाई प्रेरित गरिनु पर्दछ ।
गाउंफर्क अभियान अव फेरी लागु गर्नु पर्दछ । यतिन्जेल युवाहरु बाहिर बसे त ठिकै गरे । कसैले नयाँ सीप सीके, कसैले भाषा सिके, कसैले लगानीका आधार सिके त कसैले सभ्यता सिके होलान ।
ब्यक्ति संग रहेको पुँजिलाई ब्यावसायिक कममा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंशलाई उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्न ठोस योजना बनाइनु पर्दछ । देशभित्र छरिएर रहेका स्रोतहरको परिचालन गरिनु पर्दछ । लगानीकर्ताको पुँजिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।
बृद्ध र बच्चा बाहेक हरेक नेपाली नागरिकलाई काम गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्नु पर्दछ । काम नगरि गफिएर ठुलो हैन काम गर्ने नै ठुलो होे भन्ने मान्यता स्थापित गरिनु पर्दछ । पलायन भएर गएको ठुलो श्रमशक्तिलाई नेपाल भित्राउने योजना बनाइनु पर्दछ । गाउंफर्क अभियान अव फेरी लागु गर्नु पर्दछ । यतिन्जेल युवाहरु बाहिर बसे त ठिकै गरे । कसैले नयाँ सीप सीके, कसैले भाषा सिके, कसैले लगानीका आधार सिके त कसैले सभ्यता सिके होलान ।
जेसुकै होस । आज समयले तिनै युवाहरुको खोजी गरिरहेको छ । अव राष्ट्रको उन्तीको ढोका तिनै श्रमिकहरुको हातमा छ,जो श्रम गर्छन,जो स्वरोजगारको खोजी गर्छन र आत्मनिर्भर भएर बाँच्छन । ती सवै जनताका लागि नेपालको कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी, जंगल, माटो उद्योग, ब्यापार, जडिबुटी फलफुल सवै क्षेत्रले हामीलाई उपयोग गर भन्ने सन्देश दिइरहेका छन । यसमा नै हाम्रो भविश्य छ ।